Gandawun Shwe Bagan – Page3– Travel & Tours
July 9, 2018 6:31 am
TMW Group Company (Sony) ကုန်သည်ကြီးများ၏ Scandinavia Trip!! ဂန္ထဝင်ရွှေပုဂံမှပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ရရှိ၍ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ရှင့်။ နောင်များမှာလည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံရန်မျော်လင့်လျက်ပါ…… 🙂
July 9, 2018 6:27 am
July 9, 2018 6:25 am
July 9, 2018 6:23 am
July 9, 2018 6:21 am
July 9, 2018 6:17 am
ငွေရည်ပုလဲကုမ္ပဏီ Group ( Mandalay -BKK Fun Trip ) We are the Crown 👑. We own the Sea 🌊 & Sky 🌌. Group photo of the day. ဂန္တ၀င်ရွှေပုဂံ Travel & Tours ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ နှစ်စဉ်ဆက်တိုက်အားပေးတဲ့အတွက် ငွေရည်ပုလဲကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းများကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း.. နောက်လဲ ပြန်လည်ဆုံစည်းကြပါစို့
July 9, 2018 6:15 am
N/ Europe Trip ( SONY တို့ပျော်လျှက် ဂန္တဝင်နဲ့ခရီးဆက်.) ! – @Dfds Cruises, Queen Of Scandinavia, From Oslo To Copenhagen.
June 27, 2018 9:06 am
#ဒယ်အိုးဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ🙏🏻 #ပီကင်းဟောင်ကောင်တရုတ်ပြည်စွယ်တော်ခရီးစဉ် အမှတ်တရ…ပုံများပို့ပေးတဲ့ ဆရာတော့်ဒကာ ဒကာမများကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်🙏🏻🙏🏻🙏🏻